मेलम्चीको पानी आज सुरूङमा खसालिने, कहिले आइपुग्छ काठमाडौं? सबैले थाहा पाउनु पर्ने — Imandarmedia.com
मेलम्चीको पानी आज सुरूङमा खसालिने, कहिले आइपुग्छ काठमाडौं? सबैले थाहा पाउनु पर्ने
काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आज सुरूङमा खसालिने भएको छ। गत २ असारमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भारपछि सुरूङमा पानी खसाल्न लागेको हो।
बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्चीको मुहान मर्मत सम्भार सकिएको छ। योसँगै पानी खसालिन लागेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौड्यालले जानकारी दिए।
हेडवर्क्स र सुरूङ सफा गर्ने सकिएसँगै पानी सुरूङमार्गमा खसालिन लागिएको उनको भनाइ छ। अस्थायी रूपमा मेलम्ची खानेपानी चैत मसान्तभित्र काठमाडौं झार्ने सरकारको योजना थियो।
सोही अनुसार मर्मत सम्भारको कामलाई तीव्रता दिएको थियो। भोलि सुरूङमा पानी खसालिन्छ। सुरूङमा पानी भरिएर काठमाडौं आइपुग्न केही दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हेडवर्क्स र सुरूङ सफा गर्ने बाहेकको अन्य काम सकिएको छैन्।
गत असारमा आएको बाढीले हेडवर्क्स पुरेको थियो भने सुरूङमा सामान्य क्षति पुगेको थियो। आज मंगलबार सुरूङमा पानी हालिने, सो पानी सुन्दरीजलस्थित वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा आइपुग्न केही दिन लाग्नेछ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता डिभिजनल ईन्जिनियर राजेन्द्र पन्तले अस्थायी रूपमा पानी ल्याउन आवश्यक संरचना तयार भइसकेको बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजना क्षेत्रमा पुग्ने ६ मध्ये तीन ठाउँमा अस्थायी पक्की पुल निर्माण भएका छन्।
बाँकी काम निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पन्तको भनाइ छ।गत वर्ष १७ चैतमा मेलम्चीको पानी पहिलो पटक काठमाडौंमा झारिएको थियो । वैशाखमा दोस्रो चरणमा गरेर राजधानीमा १७ करोड लिटर पानी वितरण थालिएको थियो।
सुरूङ परीक्षणका लागि १ असारमा सुरूङमा पानी बन्द गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै मेलम्ची नदीमा बाढी आएको थियो। बाढीले मेलम्चीको माथिल्लो भागमा हिमपहिरोले बगाएर राखेको पुरानो थेग्रिन जम्मा भएको थियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको औपचारिक रूपमा दोस्रो पटक उद्घाटन गर्न लागिएको थियो।
तर, निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएसँगै उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित भएको छ।स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै सरकारले मेलम्चीको काम चाँडो सक्न दबाब दिँदै आएको थियो ।
जसले गर्दा अहिले पनि सुरूङ सफा गर्ने कामबाहेक अन्य बाटो बनाउने, पुन निर्माण गर्ने लगायतका काम जारी नै छ। तेस्तै,अर्थ मन्त्रालयले सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ।
अर्थतन्त्रको संकट टार्न मन्त्रालयले सरकारी कार्यालमा हुने इन्धनको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।
अर्थ मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक विदाको दिन सरकारी सवारी प्रयोग नगर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको बताए। पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशत कम हुने गरी कटौती योजना बनाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
सर्वसाधारणलाई समेत पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग घटाउन आह्वान गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको उनले जनाए । भारतीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी रोक्ने विषयमा पनि सरकार लागि परेको उनको भनाइ छ।